Ihe e buru n’amụma na a ga-eme ugwu ndị dị n’Izrel (1-15)
A ga-akpọghachite ndị Izrel n’ala ha (16-38)
“M ga-eme ka mmadụ niile mara na aha m nke dị ebube dị nsọ” (23)
“Ala nke tọgbọbu nkịtị dịzi ka ogige Iden” (35)
36 “Nwa nke mmadụ, buo amụma banyere ugwu ndị dị n’Izrel. Kwuo, sị, ‘Ugwu ndị dị n’Izrel, nụrụnụ ihe Jehova kwuru. 2 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: “Ndị iro unu kwuru gbasara unu, sị, ‘Ntọọ! Ọ bụ anyị nwezi ebe ndị dị elu dị kemgbe oge ochie.’”’+ 3 “N’ihi ya, buo amụma, sị ha, ‘Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: “E meela ka unu tọgbọrọ chakoo, e sikwa n’akụkụ niile lụso unu agha, nke mere ka ndị fọdụrụ ná mba dị iche iche chọwa ka unu bụrụ nke ha, nke mekwara ka ndị mmadụ jiri ọnụ na-eme unu ihe, na-akọkwa akụkọ ọjọọ banyere unu.+ 4 N’ihi ihe a ha mere, ugwu niile dị n’Izrel, nụrụnụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru. E nwere ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova gwara ugwu ukwu na ugwu nta, iyi na ndagwurugwu, na ebe ndị a lara n’iyi, ndị tọgbọzi nkịtị,+ nakwa obodo niile na-enweghịzi ndị bi na ha, ndị a kwakọọrọ ihe dị na ha, ndị ndị fọdụrụ ná mba dị iche iche gbara ha gburugburu na-akwa emo.+ 5 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova gwara ha, sị: ‘M ga-eji ezigbo ịnụ ọkụ n’obi+ kwuo ihe ga-eme ndị fọdụrụ ná mba dị iche iche nakwa ihe ga-eme ndị Ịdọm niile. Ha niile na-akwa m emo. Obi bụkwa ha sọ aṅụrị+ ka ha na-eweghara ala m. Ha na-achọkwa iweghara ebe dị iche iche anụmanụ na-ata ahịhịa na ya, na-achọkwa ịkwakọrọ ihe ndị dị n’ala m.’”’+ 6 “N’ihi ya, buo amụma banyere ala Izrel, gwakwa ugwu ukwu na ugwu nta, nakwa iyi na ndagwurugwu, sị, ‘Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova sịrị: “M ga-eji iwe na ịnụ ọkụ n’obi kwuo okwu, n’ihi na mba dị iche iche emenyela unu ihere.”’+ 7 “Ọ bụ ya mere Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova ji kwuo, sị: ‘Eweliela m aka m elu ṅụọ iyi na ihere ga-eme mba ndị gbara unu gburugburu.+ 8 Ma, ununwa bụ́ ugwu niile dị n’Izrel, a ga-enwe osisi ndị ga-awa ọtụtụ alaka n’elu unu, ha ga-amịkwa mkpụrụ ndị Izrel bụ́ ndị m ga-ata,+ n’ihi na ọ gaghị ete aka ha alọta. 9 Ihe a ga-eme maka na m nọnyeere unu. M ga-echekwa ihu n’ebe unu nọ. A ga-akọ ihe n’elu unu, ghaakwa mkpụrụ n’elu unu. 10 M ga-eme ka ndị Izrel dị ọtụtụ n’elu unu, ya bụ, ndị Izrel niile. Ndị mmadụ ga-ebikwa n’obodo ndị dị n’Izrel.+ A ga-arụghachikwa ebe ndị ahụ a lara n’iyi.+ 11 N’eziokwu, m ga-eme ka mmadụ na anụmanụ dị ọtụtụ n’elu unu.+ Ha ga-ehi nne, mụọkwa ụmụ. M ga-emekwa ka e biri n’elu unu otú ọ dị n’oge mbụ.+ M ga-emekwa ka ihe gaziere unu ugbu a karịa n’oge gara aga.+ Unu ga-amarakwa na m bụ Jehova.+ 12 M ga-eme ka ndị Izrel, bụ́ ndị m, biri n’elu unu. Unu ga-abụ nke ha.+ Unu ga-abụkwa ihe ha ketara. E nweghịkwa ihe ga-eme ka unu gbawa ha aka ụmụ ọzọ.’”+ 13 “Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: ‘E nwere ndị na-asị unu: “Unu bụ ala na-eri ndị mmadụ, na-agbawakwa mba nwe ya aka ụmụ.”’ 14 ‘N’ihi ya, unu agaghịzi na-eri mmadụ. Unu agaghịkwa na-agbawa mba nwe unu aka ụmụ.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a. 15 ‘M gaghịzi ekwe ka mba dị iche iche kparịa unu ọzọ. M gaghịkwa ekwe ka ndị mmadụ kwawa unu emo.+ Unu agaghịzi akpatara mba nwe unu ọdachi.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a.” 16 Jehova gwara m okwu ọzọ, sị: 17 “Nwa nke mmadụ, mgbe ndị Izrel bi n’ala ha, ha ji àgwà ha na omume ha merụọ ya.+ N’anya m, ihe ndị ha nọ na-eme mere ka ha ghara ịdị ọcha otú ahụ nwaanyị nọ ná nsọ ya na-adịghị ọcha.+ 18 N’ihi ya, m ji iwe mee ha ihe maka ndị ha gburu* n’ala ha+ nakwa n’ihi na ha ji arụsị ha dị iche iche na-asọ oyi* merụọ ala a.+ 19 M chụgara ha ná mba dị iche iche, chụsasịakwa ha n’ala dị iche iche.+ M kpere ha ikpe maka ihe ha mere na otú ha si kpaa àgwà. 20 Ma mgbe ha batara ná mba dị iche iche, ndị mmadụ nọ na-emebi aha nsọ m,+ n’ihi na ha na-ekwu banyere ndị m, sị, ‘Ndị a bụ ndị Jehova, mana ha ebighịzi n’ala ya.’ 21 M ga-eji maka aha nsọ m ghara ịgbachi nkịtị, ya bụ, aha m ndị Izrel nọ na-emebi ná mba dị iche iche ha nọ.”+ 22 “N’ihi ya, gwa ndị Izrel, sị, ‘Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova sịrị: “Ndị Izrel, ọ bụghị n’ihi unu ka m ga-eji mee ihe m ga-eme. Kama, ọ bụ n’ihi aha nsọ m nke unu mebiri ná mba dị iche iche unu nọ.”’+ 23 ‘M ga-eme ka mmadụ niile mara na aha m nke dị ebube dị nsọ,+ ọ bụ eziokwu na unu mere ka mba dị iche iche mebie ya. Mgbe m ga-eji unu mee ka mba niile mara na m dị nsọ, ha ga-amarakwa na m bụ Jehova.’+ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a. 24 M ga-esi ná mba ndị ahụ kpọpụta unu, sikwa n’ala niile kpọkọta unu, kpọlatakwa unu n’ala unu.+ 25 M ga-efesa unu mmiri dị ọcha. Unu ga-adịkwa ọcha.+ M ga-asachapụ ihe niile mere ka unu ghara ịdị ọcha,+ wepụchaakwa arụsị niile na-asọ oyi unu na-efe.+ 26 M ga-eme ka unu nwee otu obi,+ meekwa ka mmụọ m na-akpa ike n’ahụ́ unu.+ M ga-eme ka unu gharazie inwe obi nkume+ ma mee ka obi unu dị nro.* 27 M ga-enye unu mmụọ nsọ m. M ga-emekwa ka unu na-eso ntụziaka m.+ Unu ga na-emekwa ihe m kpebiri ka unu na-eme. 28 Unu ga-ebi n’ala ahụ m nyere nna nna unu hà. Unu ga-abụkwa ndị m, mụnwa abụrụ Chineke unu.’+ 29 “‘M ga-asachapụ ihe niile mere ka unu ghara ịdị ọcha. M ga-akpọ nri òkù, meekwa ka o hie nne. Agaghịkwa m eme ka ụnwụ dịrị n’ala unu.+ 30 M ga-eme ka mkpụrụ osisi hie nne, meekwa ka ala na-eme nri otú dị mma. Ihe a ga-eme ka a gharazie inwe mgbe mba dị iche iche ga-akparị unu n’ihi ụnwụ.+ 31 N’oge ahụ, unu ga-echeta ihe ọjọọ unu nọ na-eme nakwa omume unu na-adịghị mma. Onwe unu ga na-asọkwa unu oyi n’ihi mmehie unu nakwa n’ihi arụ niile unu kpara.+ 32 Ma, burunụ ihe a n’obi: Ọ bụghị n’ihi unu ka m ga-eji eme ihe a.+ Ndị Izrel, ihere mee unu, ihere megbuokwa unu.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a. 33 “Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: ‘N’ụbọchị m ga-asachapụ mmehie unu niile, m ga-eme ka unu biri n’obodo unu.+ A ga-arụghachikwa ebe ndị ahụ a lara n’iyi.+ 34 A ga-emecha kọwa ihe n’ala onye ọ bụla na-agafe ya na-ahụ na ọ tọgbọ nkịtị. 35 Ndị mmadụ ga-asịkwa: “Ala nke tọgbọbu nkịtị dịzi ka ogige Iden.+ Obodo ndị ahụ bụ́bu ikpo nkume, ndị tọgbọkwa nkịtị, ndị a kụturu ụlọ ndị dị na ha akụtu, bụzi ebe a rụsiri ike. Ndị mmadụ ebirikwala na ha.”+ 36 Mba ndị ga-afọdụ gburugburu unu ga-amara na mụnwa, bụ́ Jehova, arụghachila ụlọ ndị a kụturu akụtu, nakwa na m kụrụ ihe n’ala tọgbọbu nkịtị. Ọ bụ mụnwa, bụ́ Jehova, kwuru ihe a, meekwa ya.’+ 37 “Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: ‘M ga-achọ ka ndị Izrel rịọ m ka m mee ka ha hie nne ka ìgwè ewu na atụrụ. 38 M ga-emekwa ka ha dị ka ìgwè ndị dị nsọ, dịkwa ka ìgwè ewu na atụrụ na-adị na Jeruselem* n’oge ememme.+ Ndị mmadụ ga-eju ebe niile n’obodo ndị bụ́bu ikpo nkume.+ Ha ga-amarakwa na m bụ Jehova.’”
^ Ma ọ bụ “ọbara ndị ha wụfuru.”
^ Ya bụ, ka obi ha na-anabata ntụziaka Chineke.
^ O nwere ike ịbụ, “dịkwa ka ìgwè atụrụ ndị e ji achụ àjà na Jeruselem.”